चिसो मौशम सुरु भएसँगै गाडीको सिसामा लाग्ने बाफ हटाउन यी काम गर्नुहोस् – Gandaki Chhadke
काठमाडौं । देशको तापक्रम घट्दो क्रममा छ । काठमाडौं लगायत नेपालको तराई तथा पहाडी क्षेत्रमा विस्तारै जाडो बढ्दैछ। अझ हिमाली क्षेत्रमा त कयौ स्थानमा हिमपात सुरु भइसकेको छ । यस्तोमा चार पाङ्ग्रेको यात्रा आरामदायी तथा सुरक्षीत मान्न सकिन्छ । तर, चिसो मौसममा कार चलाएर हिड्दा गाडीको विण्डस्कृनमा वाफ जमेर भने धेरैलाई हैरान पार्ने गर्छ । गाडी भित्रको र वाहिरको तापक्रम समान नहुँदा यस्तो हुने गर्छ ।
बाहिरको दृष्य नै नदेखिएपछि दुर्घटना हुने गरेको प्रसस्त उदाहरण पाइन्छ । त्यस्तो वाफलाई केही समयको लागि कपडाले पुछेर पनि हटाउन सकिन्छ तर, यो दिगो हुँदैन। यसरी चालकले अगाडिको बाटो हेर्नु पर्ने मुख्य सिसामा नै वाफजम्दा जाडो मौसममा गाडी चलाएर हिड्न सारै अफ्ठ्यारो पर्छ । वाफ लाग्दा अगाडिको भिजिबिलीटी कम भएर दुर्घटना समेत हुने गरेको समाचार आउने गरेका छन् ।
जाडो महिनामा वा पानी परेको अवस्थामा यस्तो वाफ सिसामा उठेर बाहिर केही नदेखिने हुने गर्छ । कहिले काही गर्मीको मौसममा पनि गाडी भित्र एसी खोलेर हिड्दा यस्तो समस्या आउने गर्छ। यस्तो समस्या आउनुको मुख्य कारण कार भित्र र वाहिरको फरक तापक्रमले गर्दा हो । जाडो मौसममा कारको भित्री भागमा चालक तथा यात्रुको तापक्रम तथा स्वासप्रश्वासका कारणले पनि बाहिरभन्दा बढि तातो हुने गर्छ । क्यावीनमा भएको बढि तापक्रमको कारण सिसामा वाफ लाग्छ ।
वाफ हटाउन के गर्ने ? जाडो मौसममा कार चलाएर हिड्दा वा कार स्टार्ट गर्दाको सुरुकै अवस्थामा पुरै सिसा वाफले ढाकेको छ भने त्यसलाई तत्काल सफा गर्नु पर्छ । यस्तो अवस्थामा सबै भन्दा पहिला गाडीमा रहेको एयर कन्डिसन चला उनु पर्छ र हावाको फ्लो सिधा अगाडिको सिसामा लगाउनु पर्छ । एसीले चिसो हावा सिसामा फाल्न थालेसँगै विस्तारै वाफ हट्दै जान्छ। केही समयपछि एसीको तापक्रम विस्तारै बढाउदै लानु पर्छ। सिसामा वाफ जम्यो भन्दैमा हातले सफा गर्नु हुँदैन । हातले सफा गर्ने प्रयास गरेमा झन् सिसामा दाग लाग्छ ।
यदि गाडीमा एसी छैन भने के गर्ने त ? कहिले काँही गाडीमा एसी नहुन पनि सक्छ वा एसीले काम नगर्न सक्छ । अझ कठाङ्रीदो चिसो मौशममा एसी खोलेर गाडी चलाउने कुरो संभव हुँदैन । यस्तो अवस्थामा गाडीमा रहेको हिटर खोलेर पनि वाफ हटाउन सकिन्छ । तर, याद राख्नु पर्ने मुख्य कुरा के हो भने हिटर चलाउँदा गाडीमा हावाको फ्लो भने क्याविन वाहिरको हुन जरुरी छ ।
क्याविन भित्रको हावा सर्कुलेट गर्दा यो उपाएले राम्रोसँग काम गर्दैन। हिटर चलाइरहदा पछाडिको सिसा पनि केही मात्रामा खोल्न जरुरी हुन्छ। एसी चलाउनको लागि गाडीमा रहेको एसीको कम्प्रेसर पनि चल्नु पर्छ र कम्प्रेसर चलाउन थप इन्धन खर्च हुन्छ। त्यसले गाडीको माइलेज र पफर्मेन्समा पनि प्रभाव पार्ने भएकोले सकेसम्म हिटरबाट वाफ हटाउने प्रयास गर्दा राम्रो हुन्छ । मेरो अटोबाट साभार